Fizahan-tany Trinidad: mpitsidika fitsangantsanganana mikatsaka fatratra ny traikefa tena izy
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Fizahan-tany Trinidad: mpitsidika fitsangantsanganana mikatsaka fatratra ny traikefa tena izy
Amin'ny Alakamisy 14 Novambra 2019, Fizahan-tany Trinidad Limited (TTL) nanao lanonana ofisialy tamin'ny fomba ofisialy hanombohana ny taom-pilalaovana 2019/2020 rehefa niantsona tao amin'ny seranan-tsambon'ny Port of Spain niaraka tamin'ny mpandeha 3,600 ny sambo mpitsangatsangana Princess Caribbean.
Ho an'ny vanim-potoanan'ny fitsangantsanganana an-tsambo ny volana novambra 2019 hatramin'ny aprily 2020 dia handray mpandeha 70,000 ny Destination Trinidad amin'ny fiantsoana sambo fito amby roapolo (27). Sambo fitsangantsanganana roa (2) vaovao sy sambo fitsangantsanganana vaovao telo (3) no hiantso ny seranan-tsambon'ny Port of Spain. Tamin'ny taona 2018 dia nahazo mpandeha 59,000 ny Destination Trinidad.
Eo amin'ny sehatra iraisampirenena, ny vanim-potoanan'ny sambo dia nisondrotra ambony; nanambara ny habetsaky ny mpandeha 28.5 tapitrisa tamin'ny taona 2018; miaraka amin'ny isan'ny mpandeha avy any Amerika Avaratra - mpandeha 14.2 tapitrisa izay marina. Raha ny marina, nibahan-toerana tao Karaiba ireo mpitsangatsangana Amerikana Tavaratra, noho ny fitsangantsanganana an-tsambo - nahitana fiakarana fito (7%) isan-jato… hatramin'ny 9.8 tapitrisa ny mpandeha tamin'ny taona 2018.
Nandritra ny fandraisan'ny mpitsangatsangana an-dranomasina ofisialy, ny talen'ny fizahan-tany Trinidad, Howard Chin Lee, dia nanipika fa “ireo mpitsangatsangana ankehitriny dia mitady traikefa vaovao; indrindra ireo an'arivony taona (na araka ny iantsoantsika azy ireo… ireo mpanakorontana) izay mikatsaka fatratra ny traikefa marina any amin'ny toerana lavitra sy lavitra ary maniry zavatra mahafinaritra hizara amin'ny namany amin'ny media sosialy ”.
Ny sambo fitsangantsanganana dia mamaly ity tontolon'ny fifaninanana ity, manolotra fisehoan-javatra mahavariana toa ny efitrano ambanin'ny rano miaraka amin'ny traikefa karazana sambo mba hitaona ny mpivahiny vaovao. Vao tsy ela akory izay ny Virgin - iray amin'ireo mpilalao malaza indrindra amin'ny indostrian'ny seranam-piaramanidina dia nanao dingana feno fahasahiana mba 'hamerenany indray ny traikefa an-tsambo.' Araka ny fanazavan'i Richard Branson, tompon'ny Virgin Cruise, "Nanokana fotoana izahay hieritreretana ny antsipiriany rehetra ary hananganana traikefa iray izay mitondra ny marika Virjiny ary manelingelina ny indostrian'ny fizahan-tany."
Manohitra an'io sehatra io ny fizahan-tany nataon'ny fizahan-tany Trinidad Trinidad tamin'ny traikefa manitrika sy marim-pototra izay nankalaza ny fanahy mavitrika sy isan-karazany an'i Trinidad tamin'ny alàlan'ny sakafo mahasarika, fialamboly nahafaly ary ireo traikefa isam-paritra tena izy, nahatonga ny toerana hiainana sy nanakorontana ny fandraisana an-tanana.
Ny feo mahafinaritra an'ny parang, vy, Moko Jumbies miloko ary dihy Maypole dia niarahaba ireo mpandeha teny amoron-dàlana rehefa nidina izy ireo. Tao amin'ny Cruise Ship Hall, natsangana ny santionany Maracas Bake sy Shark, Doubles, Coconut Water ary koa fampirantiana ny lova kakao sy kafe an'i Lopinot (miaraka amin'ny fanandramana sôkôla sy kakaô).
Ny filoha Howard Chin Lee dia nanantitrantitra ny filàn'i Trinidad hitady fomba vaovao hanatsarana bebe kokoa sy hampiasana ny fananan-tany fizahan-tany hanakorontanana ny Cruising Karaiba ary hahazo ny fizarana tsena lehibe mihoatra ny fiakarana 4% tamin'ny taon-dasa. “Ny serananay dia iray amin'ireo vitsivitsy manolotra fiantsonan'ny sambo Cruise ao an-drenivohitra, miaraka amin'ny fidirana amin'ny fivarotana maimaimpoana maimaimpoana, fivarotana fanomezana ary fivarotana ary fidirana mora any amin'ny distrikanay ara-bola. Tsy isalasalana fa manolotra tombony amin'ny fifaninanana ho an'i Trinidad io. Ankehitriny, ampio ity fialam-boly fialam-bolinay, eco ary faran'ny taona ity ary manana traikefa fizahan-tany tokana ianao toa ny nosy Karaiba hafa ”.
Amin'ny volana ho avy dia hiara-hiasa amin'ireo orinasa isam-paritra, vondrona mpihetsiketsika fizahan-tany ary mpiara-miombon'antoka amin'ny sehatry ny fizahan-tany ny fizahan-tany fizahan-tany i Trinidad, toy ny fanatsarana ny toeran-kaleha sy ny fampandrosoana ny fahaiza-manao. Handray fampiantranoana sy fampiofanana momba ny kalitaon'ny serivisy manerana ny vondrom-piarahamonina, sampan-draharaha ary sampan-draharaha ny orinasa, hizara ny fomba fitantanana tsara indrindra; ary mifantoka amin'ny olona rehetra izay nifandray mivantana tamin'ny mpitsidika iraisam-pirenena (fifindra-monina, fadin-tseranana, fitaterana, fivarotana, trano fisakafoanana ary hotely ary koa ao anatin'ny vondrom-piarahamonina). Ireo no olona hahatsapa ny tombony mivantana amin'ny fampitomboana ny fahafaha-manao orinasa sy ny fangatahana bebe kokoa amin'ny vokatra sy serivisin'izy ireo.
Ny tanjona maharitra amin'ny fizahan-tany fizahan-tany Trinidad dia ny fananganana kolontsaina asa maharitra maharitra fanofanana mitohy, famolavolana vokatra ary fanatsarana ny serivisy fanatsarana serivisy - amin'izay hitrangan'ny mpanjifa traikefa mety hitohizany sy hampivoarana ny orinasan'ny fizahantany any Trinidad.
Ny fizahantany Trinidad dia hanome fialamboly ara-kolotsaina mandritra ny taom-pilalaovana 2019/2020 manomboka amin'ny fotoana ahatongavan'ireo vahininay iraisam-pirenena amin'ny fiaingany.
FLOAT Southern Airways Express dia misidina noho ny fivezivezena any Los Angeles
Oman's SalamAir mijery ireo toerana itodiana any Eropa